ISBEDDELLADA BUUNSHAHA: TAARIIKHDA DHACDOOYINKA, ABUURKA ABUURKA IYO GEEDO, KORITAANKA IYO DARYEELLIDDA GURIGA IYO BERRIN FURAN, IYO SIDOO KALE CAYAYAANKA IYO CUDURADA - BEER CAGAARAN
Sida loo helo goosashada isweydaarka? Sharaxaada dhaqanka iyo sifooyinka beeraha
Spinach ayaa muddo dheer ahaan jirtay qaybtii ugu xiisaha badnayd ee menu-ka, labadaba iyo maalintaba labadaba. Waxaa jira noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan oo dhirta ka mid ah, oo ka mid ah saliidda isbinaajka. Waa wax aad u wanaagsan oo caafimaad leh, dhadhan fiican, iyo qurux badan.
Maqaalku wuxuu bixiyaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan guryaha iyo tiknoolajiyada ee sii kordhaya tan aad u jilicsan ee-u-dhadhan kala duwan hore u bislaaday. Waxaynu u sheegi doonaa dhammaan wixii ku saabsan faa'iidada iyo khasaarooyinka kala duwan ee noocaan ah iyo caawinta koritaanka cagaarka caafimaadka leh.
Spinach Caleen caanuhu waa cagaar caleen ah oo ka timaada reer Amaranth.
Heerkuna wuxuu gaaraa afartan mitir mitir, caleemuhu waxay yeelan karaan qaab kale - oval, tarjun ama peristopal, dusha sare ayaa laga yaabaa inay xitaa ama yar yaraan.
Midabka caleemaha waa cagaar madow. Jeebka jajaban - aan ka badnayn 28 sentimitir. On a warshad lab ah, caws ubax degdeg ah foomka, on dhirta haweenka abuur u bislaadaan.
Warshadu waa mid bisil. Laga soo bilaabo waqtiga soo ifbaxa caleemaha si buuxda oo buuxda oo kaliya hal mar baasas. Iska ilaali barafka. Waxaan ogaanay khudraddaas in ka badan laba boqol oo sano, laakiin isbinaajka oo ka soo jeeda Persia qadiimiga ah. In Europe, wuxuu ku dhacay da'da Dhexe.
Markii ugu horeysay ee ay u mahad celiso waxa ay ahaayeen muwaadiniinta Isbaanishka ah, oo bilaabay inuu soo saaro dhaqanka beerta ku yaala. Sanadihii 16-17 qarnigan, kala duwanaanta noocaas ah waxay ka mid yihiin raaxeysiga.
Guryaha dawooyinka iyo kiimikada
Iyadoo ku saleysan 100 garaam oo sheyga ah, isbinaajka waxaa ku jira:
carotene beta - 4.5 mg;
A - 750 mcg;
B2 - 0.25 mg;
B9 - 80 μg;
C - 55 mg;
E - 2.5 mg;
PP - 1.2 mg;
Choline - 18 mg.
Macro iyo walxaha raadraaca:
Ca - 106 mg;
Mg - 82 mg;
Na - 24 mg;
K - 774 mg;
P - 83 mg;
Fe - 13.51 mg;
Zn - 0.53 mg;
Cu - 13 μg;
Mn - 0.897 mg;
Se - 1 mcg.
Kaaliyeyaasha halkii 100 garaam oo sheyga - 22 kcal. Warshadu waxay leedahay xayawaan aad u firfircoon, caleemuhuna waxay leeyihiin saamayn laga duro iyo calool xanuun. Spinach waa wakiil lid ku ah bakteeriyada, sidoo kale wuxuu ka caawiyaa la dagaalanka cadaadiska iyo soo kabashada.
Urolithiasis iyo cudurrada kalyaha ee kelyaha.
Marka aad cunto karisid
Waa dheeh wanaagsan.
Ku dar qasac ama qasacad si gooni ah.
Isbaanishka subag waxaa loo isticmaalaa sida buuxinta naanaysta.
Caleemaha waxaa lagu daraa salad qudaar ah, suugo iyo cunto fudud.
Buufiska hilibka isbinaajka ayaa si sahlan loo adeegsan karo.
Marka la barbardhigo noocyo kaladuwan ma gooyaan dhadhanka suxuunta, oo ay ku jiraan, laakiin waxoogaa hoos u dhigaa.
Waxaa lagu dabaqay daaweynta xanuunka caloosha.
Cunista caleemaha isbiirtadu waxay waxtar u leedahay dhiig-yaraanta iyo dhiig-karka.
Daaweynta isku dhafan waa lagama maarmaanka u ah daaweynta cinjirka.
Spinach wuxuu faa'iido u leeyahay qanjirka thyroid.
Waxay awood u leedahay in ay yareeyso daalka iyo xiisadda indhaha.
Isticmaalka joogtada ah ee isbinaajka ayaa saameyn ku leh ilkaha iyo cirridka.
Sidee dhadhanka u kala duwan yahay?
Marka loo eego noocyada kale dhadhanka isbinaajka baruurta waa mid dhexdhexaad ah oo aad u iftiin lehcreamy iyo hindise.
Xannaanaynta iyo daryeelka
Spinach waxay u baahan tahay bacrimin iyo hodan ku leh ciidda acidic organic leh dheecaan wanaagsan. Soo saarista dhoobada boodhka ah ama taallooyinka ayaa si fiican u wanaagsan. Spinach waxaa la quudiyaa dhif: khudradda ayaa si dhakhso ah u koraa, waxayna awoodaa inay ku ururiso Nitrate. Potash iyo Bacriminta Fosfatiga waxaa la isticmaali karaa oo kaliya xilliga dayrta, ee ciidda la kariyay.
Wixii dhaqanka u baahan tahay waraabin badan, dhirta joogto ah iyo loosening, marka dhirta gaaro toban sintimitir dhererka, beerto waa in la khafiifiyaa. Waraabinta waxaa la fuliyaa subaxdii iyo fiidkii hawo qallalan, haddii ay da'ay, ka dibna aan ka horeyn laba maalmood gudahood.
Xaaladaha heerkulku waxay ku xiran yihiin gobolka beerashada, sidaa daraadeed, gobollada leh tilmaamayaasha xagaaga oo aan ka badneyn +20, isbinaajka dufanka leh ee la kariyey waxaa la beeray bishii Agoosto ilaa Sebtembar si loo helo goosashada buuxda dhammaadka guga. Gobollada kale dhaqashada baruurta barwaaqo aan qabyo ahayn iyo waxay dareemeysaa raaxo leh tilmaamayaasha xagaaga ee + 25 + 27 digrii.
Sidee loo beeraa beerta dhulka hoostiisa?
Diyaarinta Seed waa in lagu dejiyo biyo diiran laba maalmood, ka dibna la soo saaray iyo si fiican loo qalajiyey.
Iska xoqin laba marxaladood - xilliga dayrta, caleemaha ugu horeeya waxay u muuqdaan sida ugu dhakhsaha badan ee barafku dhalo, iyo guga.
Marka beeritaanka guga, haddii ciidda waa mid aad u is dulfuulan oo saliid leh, isticmaal habka beerta, dhammaan noocyada kale ee ciidda, beeritaanka waxaa lagu dhaqmaa saf.
Dhulka, fogaan ah 25-30 cm, samee grooves-saf, qoto dheer oo aan ka badnayn laba ama saddex sentimitir.
Isku duub oo ciidda dabacsan.
Sida ugu dhakhsaha badan ee sprouts ugu horeyso, waxay la socdaan in helitaanka ogsijiinka si xididada ay ku filan tahay, tanina waa ciidda way furmeen.
In kala duwan ee seedling ee beerashada, miraha lagu beeray dheriga peat.
Diiditaanka waxaa la fuliyaa Abriil-Maajo.
Geedo ayaa la dhigaa masaafada u dhaxaysa shan illaa toban sentimitir, midka dheriga ku rid dhuunta dusheeda.
Xoogaa badan, laakiin sidoo kale xaq u leeyihiin ikhtiyaarka nolosha ikhtiyaariga ah ee transplanting - geedo sii kordhaya ee sanduuqyada ama weel caag ah. Waxyaalaha beeritaanka noocan ah waxaa lagu bedelaa dhulka iyadoo la raacayo habka isdhexgalka.
Noocyada sii koraya guriga
Isbaantiga suufka ayaa sidoo kale ku habboon beerista guriga. - on balakoonada glazed, on daaqadaha dhinaca dhinaca koonfureed. Haddii daaqadaha ay wajahayaan waqooyiga, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho iftiin dheeraad ah. Beeridda waxaa lagu sameeyaa dhirta ubaxa bil kasta, sababtoo ah xaqiiqda ah isbinaajidka ayaa loo isticmaali karaa wax ka badan siddeed toddobaad. Sidaa darteed, waxaad samayn kartaa rasiidh cad oo cagaaran. Geedaha oo ka badbaaday dhowr goos-goosaar oo la siiyey fallaadooyin ayaa laga saarayaa xididka.
Hannaanka degitaanka waa sida soo socota:
Qeybta hoose ee dheriga laba-litir ah ayaa la dhigaa dheecaan.
Isku daridda ciidda ayaa loo qaadi karaa dhirta gudaha.
Seeds waxaa la dhajiyay wax ka badan hal mitir oo mitir, oo la daboolay filim.
Ka dib markii ay soo baxaan geedo, waa qiyaastii hal toddobaad, filimka laga saaro.
Heerkulka ku filan + 15 + 18 digrii.
Daryeelka waa waraabinta joogtada ah iyo bacarimiso 10kii maalmoodba mar (waxaad isticmaali kartaa bacriminta dhirta gudaha).
Sidaa daraadeed isbinaaje uma wado ilaa inta suurtogal ah, waxaa si joogto ah loo buufiyaa ama laba jeer toddobaadkii, waxaa lagu maydhaa dusha maydha.
Muuqaalka muuqaalka dhirta lix ilaa siddeed caleemo, calaamad ah in isbinaajka la soo ururin karo. Xilliga ugu badan ee goosashada - muuqaalka kore ee caws ubaxa. Waxaad ku soo ururin kartaa siyaabo kala duwan: xaaq, googoyn, ama jiid jilbaha.
Halkee laga iibsadaa abuurka?
Seeds iyo geedo ayaa lagu iibsan karaa dukaamo khaas ah. Haddii habka abuurka abuurka loo doorto, waxaa lagama maarmaan ah in la fiiriyo maqaalka abuurka cusub.
Geedo helitaanka marxaladda laba ama saddex caleemo. Waa in aan la waxyeeleynin iyo qaybo qafiif ah.
Qiimaha miraha ee Moscow iyo St. Petersburg waxay u dhexeeyaan min 25 illaa 50 rubi, taas oo ku xidhan iibiyaha. Geedo ku yaal magaalada Moscow waxaa lagu iibsan karaa qiimo dhan 40 rubuc oo lafdhabarta ah, oo ku yaal St. Petersburg - 30-35 rna.
Isbaanqayrka dabacsan waxay ku xiran tahay dhammaan noocyada kaluunka: xididka ama dusha sare ee geedka:
xayawaan, qajaarka qajaarka.
Dirxiga duullimaadka macdanta macdanta ayaa waxyeelo weyn gaarsiiya dalagyada. Si looga fogaado infekshanka, waxaad u baahan tahay inaad isbeddesho isbuunyo ka fog kuwa xididada iyo wakhtiga si aad uga saarto dhirta saameeya.
Ma ahan mid aad u adag in la helo goosashada caleenta caleenta labadaba gudaha bannaanka iyo guriga, iyadoo la bixiyay rijeetada dalagga iyo farsamada beerashada fudud. Xataa xannaaneeyaha bilowga ah ayaa la qabsan kara hawshan. Qof kasta wuxuu ku kori karaa isbinaajka fasalka..